Ingxelo entsha ye-WTTC yokuqhuba ukubuyisela kwimeko yesiqhelo kunye nokwandisa ukomelela kwecandelo loKhenketho noKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ingxelo entsha ye-WTTC yokuqhuba ukubuyisela kwimeko yesiqhelo kunye nokwandisa ukomelela kwecandelo loKhenketho noKhenketho
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ingxelo entsha ye-WTTC yokuqhuba ukubuyisela kwimeko yesiqhelo kunye nokwandisa ukomelela kwecandelo loKhenketho noKhenketho.
Amahlakani eBhunga lezoKhenketho kwiHlabathi liphela kunye noMphathiswa wezoKhenketho eSaudi Arabia kwingxelo entsha ebalulekileyo ebonisa amanqaku aphambili ekubuyiseleni ukuhamba kwamazwe aphesheya, kunye neengcebiso zokuqhuba ukubuyiswa kwecandelo lezoKhenketho noKhenketho, ngelixa liqinisa ukomelela kwalo.
Iindleko zovavanyo oluphezulu kunye nokuqhubeka kokuthintelwa kokuhamba kuthintela ukufikeleleka kohambo kunye nokwenza inkqubo ye-elitist.
Ngama-34% abemi behlabathi abagonywe ngokupheleleyo, ukungalingani kugonyo kusongela ukubuyela kwimeko yezoqoqosho.
Igalelo lecandelo kwi-GDP yehlabathi lihle ukusuka kwi-US $ 9.2 trillion ngo-2019, ukuya kwi-US $ 4.7 trillion ngo-2020, emele ilahleko ephantse ye-US $ 4.5 trillion.
The IBhunga leHlabathi lezoKhenketho noKhenketho (WTTC) kwaye i Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho eSaudi Arabia usungule namhlanje ingxelo entsha ebalulekileyo ebalaselisa ezona ndawo ziphambili ekubuyiseleni ukuhamba kwamazwe aphesheya, kunye neengcebiso zokuqhuba ukubuyiselwa kwecandelo lezoKhenketho noKhenketho, ngelixa liqinisa ukomelela kwalo.
Ngobhubhani ozisa ukhenketho lwamazwe aphesheya malunga nokuma ngokupheleleyo, ngenxa yokuvalwa kwemida kunye nezithintelo ezinzima zokuhamba, uKhenketho noKhenketho bahlupheke kakhulu kunalo naliphi na elinye icandelo kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo.
Igalelo lecandelo kwi-GDP yehlabathi lihle ukusuka kwi-US $ 9.2 trillion ngo-2019, ukuya kwi-US $ 4.7 trillion ngo-2020, emele ilahleko ephantse ye-US $ 4.5 trillion. Ngapha koko, njengoko ubhubhane ugqobhoza entliziyweni yecandelo, i-62 yezigidi ezothusayo zohambo kunye nemisebenzi yoKhenketho ilahlekile.
Le ngxelo intsha ibalaselisa WTTCUqikelelo lwezoqoqosho lwamva nje oludiza ukuba ukubuyela kwecandelo liza kuhamba kancinci kunokuba bekulindelwe kulo nyaka, ikakhulu linxibelelene nokuqhubeka kokuvalwa kwemida kunye nemiceli mngeni enxulumene nokuhamba kwamazwe.
Igalelo lecandelo kwi-GDP kulindeleke ukuba linyuke nge-30.7% ngonyaka-ngo-2021, emele kuphela i-US $ 1.4 trillion yokunyuka, kwaye kwinqanaba lokufumana kwakhona, igalelo loKhenketho noKhenketho kwi-GDP linokubona unyaka ofanayo- Ukunyuka konyaka kwe-31.7% ngo-2022.
Okwangoku, imisebenzi yecandelo imiselwe ukuba inyuke nge-0.7% kuphela kulo nyaka, imele kuphela imisebenzi ezizigidi ezibini, ilandelwe yi-18% inyuswe kunyaka olandelayo.
Imele eyona ngxaki imbi kakhulu kwicandelo lezoKhenketho nezoKhenketho, i-COVID-19 ayichaphazelanga uqoqosho lwehlabathi kuphela, kodwa ikwayimpilo kunye nokuphila kwabantu kwihlabathi liphela.
Phambi kokuba ubhubhane uqale ukuba nefuthe elibi kwicandelo, uKhenketho nezoKhenketho lelinye lawona macandelo makhulu kwihlabathi jikelele, elinoxanduva lomsebenzi omnye kwemine eyenziweyo kwihlabathi liphela phakathi kowama-2015-2019 kwaye yayingoyena mntu ubalulekileyo kuphuhliso lwezentlalo noqoqosho kunye nokuncitshiswa kwendlala. amathuba kwabasetyhini, abambalwa, uluntu lwasemaphandleni, kunye nolutsha.
Le ngxelo intsha ivela WTTC, Ngokubambisana ne Icandelo loMphathiswa Wezokhenketho eSaudi Arabia ityhila iingongoma zentlungu ezijolise kumceli mngeni ongxamisekileyo wokubuyisela ukushukuma kwamazwe aphesheya, okusekwe yimfuno yokujongana nobuthathaka becandelo eliboniswe ngexesha lendyikityha ngokumisela kwakhona ikamva elizinzileyo, eliqukayo nelomeleleyo.
Le ngxelo intsha ibalulekileyo ibonisa indlela ukuvalwa kwemida yamazwe aphesheya, ukungaqiniseki ngenxa yokutshintsha kwemithetho, iindleko ezingavumelekanga zovavanyo, kunye nokungabikho kwembuyekezo kunye nokukhutshwa kokugonywa okungalinganiyo kuthintele ukubuyiswa kwecandelo lezoKhenketho noKhenketho kwiinyanga ezili-18 ezidlulileyo.
NgoJuni ka-2020, onke amazwe asenendlela ethile yezithintelo ekuhambeni, edlala indima ebalulekileyo ekwehliseni inkcitho yamanye amazwe ngama-69.4% ngaloo nyaka. Ezi zithintelo, ezihlala zitshintsha kwaye zidideka, ziqhubekile ngokuchaphazela ukuzithemba kwabahambi ngokubhukisha, njengoko kwakungekho ndlela icacileyo, okanye ukuvumelana kwehlabathi, ngokweemfuno zovavanyo, ukuvalelwa yedwa, kunye nemigangatho yokugonya.
Ngokwengxelo, olu vavanyo lwamva nje lomhambi jikelele olupapashwe ngu-Oliver Wyman lubonisa kuphela iipesenti ezingama-66 zokuya phesheya kwiinyanga ezintandathu ezizayo, kwaye ngaphantsi kwesinye kwi-10 (9%) babhukishe uhambo lwexesha elizayo, bebonisa ukungaqiniseki okuqhubekayo izigqibo zomhambi. Uvavanyo lwe-PCR olunexabiso liyaqhubeka nokuba nefuthe elibi kubahambi, ukubuyisela umva nayiphi na inkqubela phambili yokwenza ukuba ufikelelo lufikeleleke kunye nokudala ukungalingani okuthe kratya.
UJulia Simpson, uMongameli kunye ne-CEO WTTC, "Icandelo loKhenketho noKhenketho ngumba ophambili kubomi obuninzi obuqhubekekayo ukuchaphazeleka kukusilela kokungqinelanisa nokumisela imigaqo ye-COVID-19 kwihlabathi liphela. Akukho sizathu sokukhutshwa kwemigaqo, amazwe kufuneka ajoyine imikhosi kwaye ahambelane nemigaqo. Amazwe amaninzi asakhasayo axhomekeke kuhambo lwamazwe aphesheya kuqoqosho lwawo kwaye ashiyeke exhelekile.
“Njengokuma ngoku, ngama-34% kuphela abemi behlabathi abagonywe ngokupheleleyo, oku kubonisa ukuba kusekho ukungalingani okukhulu kwamachiza kwihlabathi jikelele. Isicwangciso sokugonya esikhawulezayo nesilinganayo, kunye nokuqondwa okuphindayo kwihlabathi liphela kwazo zonke izitofu ezivunyiweyo ze-WHO, ziyafuneka ukuze kuvulwe ngokukhuselekileyo uhambo lwamazwe aphesheya kwaye kuqaliswe ngokukhawuleza umsebenzi woqoqosho.
“I-WTTC iyakuqonda ukubaluleka kokubuyisa ukuzithemba kwabathengi, kwaye siphuhlisile, necandelo likarhulumente nelabucala lisebenza kunye, iseti yeenkqubo zokuHamba eziKhuselekileyo ezihambelanayo kumashishini ali-11 kwicandelo loKhenketho noKhenketho. Isitampu sethu esikhuselekileyo sohambo olukhuselekileyo samkelwe kwiindawo ezingaphezu kwama-400 kwihlabathi liphela. ”
Ohloniphekileyo u-Ahmed Al Khateeb, UMphathiswa Wezokhenketho eSaudi Arabia uthe: “Le ngxelo ibonisa ifuthe le-COVID-19 kwishishini lokuhamba nokhenketho kwihlabathi-kunye nokungalingani kokubuyiselwa okuqhubekayo ngoku. Kufuneka sicace gca: ngaphandle kokuba ukhenketho lubuyela umva uqoqosho aluyi kuphinda lubuye.
“Kufuneka sihlangane ukuze sixhase eli shishini libaluleke kangaka, nelaliphambi kobhubhane elalinoxanduva lwe-10% ye-GDP kwihlabathi jikelele. Ngale ngxelo, iSaudi Arabia icela icandelo ukuba lihlangane kuHlenga-hlengiso loKhenketho ukwenzela ikamva elizinzileyo, eliqukayo nelomeleleyo. ”
Ingxelo ichaza iingcebiso zokuphumeza ukubuyela ngokukhawuleza kwecandelo lezoKhenketho noKhenketho, njengoko i-COVID iba sisiphelo.
Ujoliso olusekwe kulungelelwaniso lwamazwe ngamazwe lokuvula imida kwakhona, iimeko zovavanyo ezifanelekileyo, kunye nokwenza ukuba ikhompyutha isebenze ngokuhamba kunye, kunye nokuzinza kunye nefuthe kwezentlalo embindini wecandelo, kuya kubuyisela ukuhamba kwamazwe aphesheya kunye necandelo lezoKhenketho noKhenketho. La manyathelo azakusindisa izigidi zemisebenzi, kwaye yenze ukuba abahlali, amashishini, kunye neendawo ezixhomekeke kwicandelo lezoKhenketho noKhenketho, ukuba baphinde baphile kwaye baphumelele kwakhona.